गर्भवतीको स्वास्थ्य र परम्परागत ज्ञान « Sadhana
गर्भवतीको स्वास्थ्य र परम्परागत ज्ञान
केही महिना अघि विदेशबाट आएका एक नेपाली जनस्वास्थ विज्ञले ‘नेपालमा रक्तअल्पता कम गर्न फलामको माछा प्रयोग गर्न आवश्यक छ, त्यसको लागि अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने विषयमा छलफल गर्न तपाईं आइदिनुपर्‍यो’ भने ।
पछि छलफलका क्रममाती नेपाली विज्ञले भने, ‘कम्बोडियामा धेरै महिलालाई रगतको कमीभएको थाहा पाएपछि एक विदेशी डाक्टरले खाना पकाउँदा फलामको माछा खाना पकाउने भाँडामा हाल्ने गर्नू भनेर सिकाए ।
यसरी खाना पकाउँदा भाँडोमा फलामको माछा राखेको खण्डमा फलामको माछामा रहेको फलामतत्व खाने कुरामा जान्छ र महिलाहरूले पर्याप्त लौहतत्व पाउँछन्भन्ने उद्देश्यले यस किसिमको प्रयोग गरिएको थियो ।’उनले भने, ‘वास्तवमा यो तरिका अपनाएपछि कम्बोडियाका महिलाको स्वास्थ्यमा सुधार आयो ।
उनीहरूको रक्तअल्पता घट्योभनेर बीबीसीमा पनि समाचार आयो । यसको लागिबिल एन्ड मिलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनले झन्डै ८ लाख डलर बराबरको सहयोग पनि दिएको भनेर समाचारमा आएको थियो ।’उनको कुरा सुनेपछि मैले हाँसेर भनेकी थिएँ, ‘तर नेपालमा त फलामको भाडाँमा खाना पकाउने चलन परम्पराकै रुपमा रहेको छ । त्यसको लागिभिन्नै ‘फलामको माछा’बनाउनु त पर्दैन होला ।’
हाम्रो देशमात फलामको भाँडामा पकाएको दाल–तरकारी भातसँग मुछेर खाइन्छ । यसरी खाँदा अचारमा रहेको भिटामिन ‘सी’ले दालमा रहेको लौहतत्व शोषण गर्न मद्दत गर्छ। लौहतत्व शरीरमा पुगेपछि रक्त अल्पताकम हुन्छ । फलामको भाँडाको यस उपयोगिताबारे अहिले विज्ञानले सिद्ध गरिसकेको छ ।
फलामको भाँडामा पकाएको खाना स्वस्थकर हुन्छ भन्ने ज्ञान हाम्रापुर्खाहरूलाई थियो । तर अहिले त्यो ज्ञानलाईवास्तागरिन्न । शायद विदेशी भाषामा लेखिएका र विदेशीहरूले आएर नेपालमा त पौष्टिक तत्व स्थानीय खानामा धेरै पाइन्छ, फलामको भाँडामा पकाएको खाना राम्रो हुन्छ भनेपछि मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘लौ स्थानीय खाना र फलामको भाँडामा पकाएको खाना राम्रो हुने रहेछ, यसले नै रक्तअल्पता कमगर्न मद्दत गर्छ’ भन्छ होला ।
लौहतत्वको कमीले मात्रनभएर रक्तअल्पता हुने वंशाणुगत कारण पनि हुन्छ । त्यो समस्या चाहिँ केवल खानेकुरा दिएर मात्र समाधान गर्न सकिन्न । यसको लागि भिन्नै प्रकारको उपचार चाहिन्छ ।
नेपालका कतिपय स्थानमा मेथीलाई एकरात भिजाएर खिर बनाई सुत्केरीलाई ख्वाउने चलन छ । एक सय ग्राम मेथीमा झन्डै ८.४७ मि.ग्रा.लौहतत्व, केही प्रोटिन र क्याल्सियम पनि हुन्छ । शरीरमा रगतको कमी भएका महिलालाई प्रोटिन र क्याल्सियम पनि कम हुने सम्भावना हुन्छ ।
नेवारी खाजा‘समयबजी’एक सम्पूर्ण भोजन नै मान्न सकिन्छ । अफसोस ! आजकल खाजा भनेपछि अनेक पत्रु खाना र बिस्कुट हुन्छ, समयबजी खाने चलन हराउँदै गएको छ ।
लट्टेको सागलाई गोलभेंडा हालेर पकाइयो रभातवा रोटीसँग, दही वा महीसँग खाइयो भने शरीरमा धेरै मात्रामा पौष्टिकता पुग्छ ।तर अहिले गाउँघरमा लट्टे हराउँदै गएको छ ।लट्टे रातो र हरियो दुई थरीको हुन्छ । यसमा आलु मिसाएर तरकारी खान सकिन्छ ।
१ सयग्राम लट्टेमा झन्डै ४ ग्राम प्रोटिन र झन्डै ५ मि.ग्रा.लौह तत्व हुन्छ । क्याल्सियम पनि पर्याप्त हुन्छ । सजिलैसँंग फल्ने लट्टेको प्रयोग गर्दा शरीरलाई चाहिने सूक्ष्म पोषणतत्व पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन्छ । यस्ता खाना गर्भवतीको लागि उपयुक्त हुन्छ । लट्टे सजिलैसँग बारीमा फल्छ । खासै मल पनि चाहिन्न । लट्टेको दानालाई तराईतिर रामदाना भनिन्छ । दाना भुटेर लड्डु बनाइन्छ । यसको पीठो पनि बनाइन्छ ।
यस्तै गरी १ सय ग्राम ज्वानोमा १६ ग्रामप्रोटिन, १०.३४ मि.ग्रा. क्याल्सियम पाइन्छ भने १३.६५ मि.ग्रा. लौहतत्व पाइन्छ ।नेपाली परम्परामा ज्वानो सुत्केरीलाई अनिवार्य रुपमा दिने गरिन्छ । चुकन्दरमा पनि पर्याप्त मात्रामा लौहतत्व पाइन्छ । गर्भवती र सुत्केरी हुँदा यी दुवैको प्रयोगले रगतको कमीबाट बचाउन मद्दत गर्छ । साथै यी वस्तुमा पर्याप्त मात्रामा रेसादार पदार्थ पनि हुन्छ । यसले गर्दा कब्जियत हुनबाट पनि रोक्न मद्दत पुग्छ ।
त्यसैगरी नेपालमा अमला र अम्बा सस्ता फलफूल हुन् । अमला वर्षभरि नैपाइने फलफूल हो । यसमा सूक्ष्म मात्रामा क्याल्सियम, लौहतत्व र धेरै भिटामिन ‘सी’ पनि हुन्छ । शरीरमा लौहतत्व राम्रोसँग शोषण गर्न भिटामिन ‘सी’को ठूलो भूमिका हुन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्भवती महिलालाई ‘आइरन चक्की’ बाँडेको वर्षौं भइसक्यो । तर अझै गर्भवती महिलाको रक्तअल्पताको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार आउन बाँकी नै छ । आइरन चक्की खाएर मात्र हुँदैन, शरीरमा रगतको मात्रा बढाउन अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वहरू पुगोस् भनेर प्रोटिन, क्याल्सियम भएका खानेकुराको पनि त्यत्तिकै जरुरी छ भन्ने कुरा प्रायःवास्ता नै गरिँदैन ।
गर्भवती महिलालाई जाँच गर्ने स्वास्थ्य चौकी वा अस्पतालहरुमा गर्भवती र उनीसँग गएका व्यक्तिहरूलाई आफ्ना वरिपरि पाइने स्वस्थकर तर सस्तो खाने कुराको बारेमा जानकारी दिएको प्रायःपाइन्न ।
गर्भवती महिलालाई स्वस्थकर खानादिने चलन धेरैजसो नेपाली संस्कृतिमा छ । गर्भवती अवस्थामा ‘दही–चिउरा’ खान दिने चलन राम्रो हो । दही–चिउरा दुवैले गर्भवती र भ्रूणलाई चाहिने ऊर्जा र सूक्ष्म पोषक तत्वदिन्छ । तर अफसोस !आजकल दही–चिउराको संस्कृतिलाई मासेर ‘बेबी सावर’ भनी विदेशीकै नक्कल गर्न थालिएको छ ।
यसमा स्वस्थकर दहीको सट्टा अस्वस्थकर केक काटेर ख्वाउने चलन छ । यसले गर्दा महिलालाई गर्भावस्थामा कहिलेकाहीँ रगतमा चिनीको मात्रा बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । यसलाई ‘गर्भावस्थाको मधुमेह’ भनिन्छ ।
यस्तो हुने बेला स्वस्थकर, बढी रेसा भएका, कम चिनी तर क्याल्सियम र लौहतत्वपाइने खानाको सट्टा केक ख्वाउने प्रवृत्ति घातक हुन्छ । गर्भवती महिलाको रगतमा चिनीको मात्रा बढी भएमा र मधुमेह भएमा उनलाई प्रसूति अवस्थामा जटिलता हुने हुन्छ । साथै शिशुको रगतमा पनि जन्मदै चिनीको मात्रा बढी हुन सक्छ । यसले गर्दा शिशुलाई पनि स्वास्थ्यमा समस्या पर्न सक्छ । त्यसैले गर्भवतीलाई केक होइन, कोदो र फापरको सुप, मालपुुवा, हलुवाखुवाए बेस हुन्छ ।
त्यसैले अस्वस्थकर खानबाट पैदा हुने समस्या नहोस्भनेर हाम्रा सांस्कृतिक र परम्परागत मान्यता अनुरूपका खानाहरूको सिंहावलोकन गर्न जरुरी छ । आधुनिकताको नाममा बजारमा पाइने अनेक थरीका पत्रु खाना गर्भवती महिलालाई दिँदा उनलाई रगतको कमी, मिर्गौलामा समस्या आदि हुन सक्छ । त्यसैले गर्भवती वा सुत्केरीलाई ज्वानो, चाकु आदि परम्परागत पौष्टिक तत्व दिनुपर्छ ,जसले उनीहरुलाई तङ्ग्रिन, दूधनिकाल्न मद्दत गर्छ ।
अहिले स्कुलहरूमा किशोरीहरूलाई ‘रक्तअल्पता’ नहोस् भनेर ‘आइरन’ चक्की बाँड्ने कार्यक्रम पनि आएको छ । ‘आइरन’ चक्की मात्र बाँडेर लौहतत्व पुग्दैन भन्ने कुरा थाहा भैसकेपछि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यही काम दोहोर्‍याउँदै छ । अझ कतिपय ठाउँमा त स्कुलमा खाजा बाँड्ने प्रचलन आएको छ ।
जनप्रतिनिधिले नै चाउचाउ जस्ता खाजा बाँड्छन् अनि किशोरीहरूले त्यही सिक्छन् र विवाहपछि गर्भावस्थामा पनि चाउचाउ, अन्य पत्रु खाना खाएर रक्तअल्पताको सिकार हुन्छन् । त्यसैले विभिन्न जातजातिका मौलिक खानालाई व्यवहारमा ल्याइयो भने गर्भवती, सुत्केरी किशोरीहरूको रक्तअल्पतामा धेरै कमी आउन सक्छ ।
किशोरीहरूलाई विभिन्न किसिमका पत्रु खाना खानबाट रोकेर स्वस्थकर खाना जस्तो– चिउरा, चना, अण्डा, भटमासखान प्रेरित गर्नु जरुरी छ, जसले गर्दा उनीहरुलाई शरीरमा पर्याप्त ऊर्जा, क्याल्सियम, लौहतत्व पुग्छ । पछि ती किशोरी युवती भएर विवाहपछि गर्भावस्थामा पनि स्वस्थ रहन सहयोग पुग्छ ।